Izandiso Zeenwele Zenwele Ezintle zaseMalaysia I-Extensions ye-Soie Virgin Hair Extensions yaseMalaysia
Izandiso zeeNtsholongwane zeenwele ze-Virgin zaseMalaysia - Izandiso zeenwele ze-Soie Virgin
ubungakanani 12 intshi 14 intshi 16 intshi 18 intshi 20 intshi 22 intshi 24 intshi 26 intshi 28 intshi 30 intshi 32 intshi 34 intshi 36 intshi 38 intshi 40 intshi
12 intshi 14 intshi 16 intshi 18 intshi 20 intshi 22 intshi 24 intshi 26 intshi 28 intshi 30 intshi 32 intshi 34 intshi 36 intshi 38 intshi 40 intshi
Izinwele ze-Organic, ezingaguqukanga ze-VIRGIN. Ukunyuswa kwethu kweenwele zaseMalaysia kunene kunene kunokuba iinwele zaseBrazil zenzele ezintle iintlobo zeenwele ezigqithiseleyo kunye ezipheleleyo. Ezi zandiso zineengqungquthela kunye nemibala kakuhle, ehlala i-2 iminyaka ngokunyamekela.
yethu Izandiso Zeenwele Zenwele Ezintle zaseMalaysia ithengwa ngqo evela eIndiya. Ngenye yeentlobo zeenwele ezingenangqondo kwiindawo zokuthengisa kunye neenwele eziphezulu. Zonke iimveliso zethu zivunwa kwiimeko zabo zendalo kwaye isiqalo ngasinye sivela kubaxhasi be-1-2 ukuqinisekisa ukuhambelana.
Ifumaneka ngobude ukuya kwii-intshi ze-40